ဆံပင်အတွက် အသင့်လျော်ဆုံး ခေါင်လျော်နည်းများ – YANGON STYLE
ဆံပင်အတွက် အသင့်လျော်ဆုံး ခေါင်လျော်နည်းများ
ဆံပင်တွေကို တစ်ပတ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်လျှော်ဖြစ်လဲ?
တချို့ကနေ့တိုင်း လျှော်ပြီး တစ်ချို့က တစ်ပတ် တစ်ခါလောက်ပဲ လျှော်တတ်ကြတယ် ဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးက ဆံကေသာတွေအတွက် ပိုကောင်းမိုသင့်လျော်စေလဲ ?
ထူထည်းနက်မှောင်ကျန်းမာတဲ့ ဆံကေသာတွေအတွက် ခေါင်းလျှော်နည်းအမှန်ကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို အရိုးရှင်းဆုံးအချက် (7) ချက်နဲ့ပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင် …
အပေါ်ယံအားဖြင့် နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်တာက ဆံကေသာ နဲ့ ဦးရေပြားတွေကို သန့်ရှင်းစေတယ် ထင်နိုင်ပေမယ့်အမှန်မှာတော့ ဦးရေပြားအဆီထုတ်လုပ်မှုကို ပိုမိုဖြစ်ပွားစေပါတယ် … ခေါင်းက အဆီထွက်လို့လျှော်လေလေ ပိုမိုအဆီထွက်လေလေနဲ့ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်သလို ဖြစ်နေတော့မှာပါ။ ၁ ပတ်မှာ ၂ကြိမ် ကနေ ၃ကြိမ် အထိ ခေါင်းလျှော်ခြင်းကသာ ဆံကေသာအမျိုးအစားအတော်များများနဲ့ ကိုက်ညီနေပါပြီနော်
2.ဦးရေပြားကို ငြင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ
သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး ဆံပင်ရှည်မြန်စေဖို့ကတော့ ဦးရေပြားကို အသာအယာနှိပ်နယ်ပြီး ခေါင်းလျှော်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆံကေသာတွေဟာ Eveတို့ထင်သလို မညစ်ပတ်နေတဲ့အတွက် လက်သည်းတွေနဲ့ အရမ်းကုပ်လျှော်တာမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်…
3.မိမိဆံကေသာနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသာသုံးပါ
ခေါင်းလျှော်ရည်ဆိုတာ ဆံပင် နဲ့ ဦးရေပြားပေါ်မှာ ခေါင်လျှော်ချိန်ခဏသာရှိနေမယ်ဆိုပြီး တွေ့ရာ ခေါင်းလျှော်ရည် ကိုအသုံးပြုမယ်ဆို အဆင်မပြေပါဖူးနော်။ မိမိဆံကေသာ က အဆီပြန်တတ်တာလား ဆံသားခြောက်တတ်တာလား ဦးရေပြားဗောက်ထတတ်တာလား ဆံပင်ကျွတ်လွယ်တာလား စတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုလည်း Skin Careလိုပဲ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတာကို ရွေးသုံးပေးဖို့လိုပါတယ်!
4.ဆံပင်ပျော့ဆေးကို ဦးရေပြားနဲ့ လက်တစ်လုံးခွာပြီး အသုံးပြုပေးပါ
ဆံကေသာတွေကို ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ ဆံပင်ပျော့ဆေးကို ခေါင်းလျှော်တိုင်းသုံးပေးရပါမယ်။ ဆံပင်ပျော့ဆေးကို ၃မိနစ် ကနေ 5မိနစ်အထိ ဆံပင်တွေပေါ်မှာလိမ်းထားခြင်းက ဆံပင်ပျော့ဆေး အာနိသင်ကို အပြည့်အဝရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ပျော့ဆေး ဆိုတာ ဆံကေသာကို ပိုမိုလှပအောင် စွမ်းဆောင်ပေးတာမို့ လိုအပ်ပေမယ့် ဦးရေပြားကို ဗောက်ထစေတတ်တာကို သတိပြုရပါမယ်နော်
5.၁ ပတ်တစ်ခါလောက် အနည်းဆုံး ဆံပင်ကို ပေါင်းတင်ပေးပါ
သင့်ဆံပင်တွေကို ချစ်တယ်ဆိုရငိ ဦးရေပြားနဲ့ ဆံကေသာတွေကိုအားဖြည့်စေတဲ့ သဘာဝပစ္စည်း သဘာဝထုတ်ကုန်များနဲ့ ၁ ပတ် တစ်ကြိမ်တော့အနည်းဆုံးပေါင်းတင်ပေးရပါမယ်နော်။ ဒီလိုပေါင်းသင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ရေရှည်မှာ ကျန်းမာလှပတဲ့ ဆံကေသာတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ …
ခေါင်းလျှော်ဖို့အတွက် ရေပူကိုလုံးဝမသုံးသင့်ပါဖူး။ ဆံသားတွေကို ခြောက်သွေ့ ပျက်ဆီးစေပါတယ်။ ရေနွေးနွေး (သို့) ရေအေးကသာလျှင် သင့်လျော်ပါတယ်။
7.ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ ဆံပင်တွေခြောက်စေဖို့ Towel နုနုလေးကိုပဲသုံးပါ
ဒါကတော့ ခေါင်းလျှော်ပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့နော် ။ ဆံပင်တွေကို ပြန်လည်ခြောက်သွေ့စေဖို့ လေမှုတ်စက်သုံးတာမျိုး ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ရေသုတ်တာမျိုးက ဦးရေပြားနဲ့ ဆံပင်တွေကို အဆိုးဝါးဆုံးသက်ရောက်စေပါတယ်။ ဆံပင်တွေ ကျိုးကြေပျက်ဆီးစေတာ အကျွတ်များတာ ရှုပ်ထွေးတာတွေကိုပိုဖြစ်စေပါတယ် ဒါကြောင့် Towel နုနုလေးနဲ့ ငြင်သာစွာ ရေခြောက်အောင် သုတ်ပေးခြင်းကသာ နည်းလမ်းမှန်ပါနော် …
အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ ၇ချက်ကတော့ ခေါင်းလျှော်ရာမှာ သတိမပြုမိလိုက်တဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးသော ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။
အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ မှန်ကန်သော ခေါင်လျှော်ခြင်းနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့အတူ Good Hair Days တွေကို ကြိုဆိုလိုက်ရအောင် …
#Shampoo #GoodHair #How_to_wash_our_hair